NGUWUPHI UMTHETHO WE-10/30, KWAYE USEBENZA NJANI? - UKUPHILA
Umthetho we-10/30 Undinike ikhaya eliCocekileyo, uHlahlo-lwabiwo mali olusempilweni, kwaye Yenza iNdlu yam ukuba ibe nokuSebenza ngakumbi
Ngakumbi ukukhathalela ekhaya kodwa ixesha elincinci lokujonga zonke izinto zasekhaya, eli hlobo lasehlotyeni kwabonakala ngathi lixesha elifanelekileyo lokuthatha (okwenyani) Ikhosi yengozi kwimveliso . Zonke iindlela zam zesiqhelo kunye neendlela ezizame kwaye ziyinyani endizigcinileyo nendlu yethu yesixhenxe ziye zangqubeka kwimfumba engenamsebenzi ezinyaweni zam kuba ubomi bethu bonke babuphakanyisiwe. Ndidinga ukuseta kwakhona.
Iingcebiso ezivela kwikhosi yemveliso ebime kakhulu yayingamanqanaba amancinci asebenza kuyo yonke ibhodi, izinto ezincinci ezenziwayo ezenziwayo, ukuba ziyabambelela, zinokujika zibe yindlela entsha ezenzekelayo yokwenza izinto nokuba zithini na imeko ngu. Umgaqo weJordani Page 10/30 umgaqo ngowenye yezi.
Nguwuphi umgaqo we-10/30?
Umgaqo we-10/30 yimantra eya kukugcina uphendula, ukhuthazwa ukuzisa wonke umsebenzi kumgca wokugqibela. Njengengcali yemveliso, iphepha lichukumisa isibonelelo sokuthatha amanyathelo ali-10 ongezelelweyo okanye imizuzwana engama-30 eyongezelelweyo ukuyenza ngokufanelekileyo.
Ndiyayithanda le ngcinga kuba, xa isenziwa, isusa yonke imisebenzi emincinci engenziwanga exhomekeke kuwe, ikhupha amandla akho ngobukho babo obungathandekiyo. Nokuba ezi zinto zizinto ezingabonakaliyo kuluhlu lwakho lwezinto oza kuzenza okanye nokuba ziyabonakala ngokwasemzimbeni, ukukwazi ukubiza loo misebenzi igqityiwe kukhululekile.
Esona siphumo silungileyo sokubekwa kweli phupha kukuba indlu yam, iphelele, inocwangco ngakumbi kunangaphambili. Umzekelo, xa ndithatha amanyathelo ongezelelweyo okanye imizuzwana ukwenza isigqibo malunga nento endiza kuyenza ngeempahla zam ezigugileyo ndiyenze, andinayo imfumba yeempahla endizokuhamba kuzo xa ilixesha lokucoca igumbi lam lokulala. Ukusebenza kakuhle kwenza umahluko obonakalayo, wengqondo, kunye neemvakalelo kwaye ndiyayithanda.
Ityala: Ifoto: Joe Lingeman; Uhlobo lweStylist: UStephanie Yeh
Iindlela ezi-5 zokuziqhelanisa nomthetho we-10/30 ekhaya
Nazi iindlela ezimbalwa endibeke ngazo le ngcebiso, ezinokukunceda ukuba ucinge ngeendlela onokuthi ufake umthetho we-10/30 kwiinkalo ezininzi zobomi bakho ekhaya:
1. Ukubeka izinto apho ziya khona.
Sonke siyazi i-adage malunga indawo yonke into nayo yonke into isendaweni yayo , kodwa ukubeka into nganye endaweni yayo kunokuziva ngathi kukutsala. Ke sibeka iphepha lesikolo elifuna ukusayinwa kwikhawuntala yasekhitshini okanye siphose indoda yeLEGO kwidrowa ye-junk. Ingxaki kukuba yonke le misebenzi ingenzeki kunye nezinto ezingasetyenziswanga ziyadibanisa.
Ukuthatha amanyathelo alishumi ongezelelweyo ukubeka iithoyi kwibhasikithi efanelekileyo yokudlala okanye ukusayina elo phepha ulisilayishe ebhegini kugcina indawo yakho yomzimba neyengqondo ingenabuzaza. Kufanelekile ngalo lonke ixesha, kwaye ngelixa ungekhe uqaphele kwangoko ukuba awurhangqwanga zizinto ezingenamsebenzi ezingasasebenziyo, uyokonwaba xa unexesha lokuthatha incwadi yakho kwigumbi elinocwangco endaweni yokukhangela ngokungakhathali Imvume yohambo lwentsimi islip ngosuku oluyimfuneko.
2. Ukugcina ikopi yamaxwebhu abalulekileyo.
Kuziva kunzima kunangaphambili ukwazi ukuba wenzeni ngeekopi ezibalulekileyo zamaphepha ezinje ngamakhadi eengxelo okanye iirekhodi zonyango. Awuziva ukhululekile ukuphosa i-original, kodwa uyazi ukuba ufuna ukuyigcina ngokwamanani, kodwa awunayo inkqubo yedijithali okanye yomzimba yokusetha. Andiyi (okwangoku) ukukuxelela ukuba wenze ezo nkqubo zilungelelaniswe, kodwa mna ndim uza kuphakamisa ukuba xa unesiqwenga esibalulekileyo sephepha, nokuba yirisithi okanye isihloko semoto, wenze ikopi yedijithali kanye ngelo xesha.
Ukuthatha loo mizuzwana ingama-30 kongeze ixesha kunye nokudakumba ekuhambeni kwexesha. Endaweni yokuthatha nje ifoto enokuthi ilahleke ngokulula kwikhamera yakho, iiapps ezinje Idropbox kwaye U-Evernote vumela ukuba wenze umgangatho ococekileyo kwifowuni yakho kwaye ungeze ukhuseleko lokuba neefayile zakho ezibuthathaka zikhuselwe. Xa ilixesha lokutsala irisithi okanye elinye iphepha, khangela ngokulula amagama aphambili kwigama lefayile. Ndithembe, uya kuzibulela.
3. Ukugqitywa ngokupheleleyo kweprojekthi yokulungiselela.
Ukwahlulwa kunye nokulungelelaniswa kuhlala kungumsebenzi ophindaphindiweyo, ngakumbi ukuba uyinxalenye yosapho olukhulayo kunye neemfuno kunye neemeko eziguqukayo rhoqo. Umzekelo, kwikhaya lethu, sihlala sijikeleza ngempahla, izinto zokudlala, kunye nezinto esele zigqithile kwaye ezifuna ukulungiswa kwaye zinikezelwe okanye zigcinelwe umntwana olandelayo okanye ixesha elizayo ezakusetyenziswa. Kuvakala ngathi sihlala sitshintsha apho sigcina khona izixhobo zaselwandle, izinto zebhola ekhatywayo, kunye nobugcisa kunye nezinto zobugcisa. Le yinxalenye yobomi kwaye uhambisana nokutshintsha kwamaxesha onyaka.
Kodwa ukuyenza ngokuchanekileyo, njengoko incam yemveliso isikhumbuza, kufuna ukuyenza yonke indlela. Oku kuthetha ukugqibezela isiphelo sokugqibela seprojekthi, ezo ntsimbi zezona zinzima ukujongana nazo kuba zifuna isigqibo okanye ukucoca okungaphezulu, njl. ezenzeka xa ufuna ukufumana into okanye ubeke into kwindawo eyiyo. Mva nje, bendizinyanzela ukuba ndigqibe ezi projekthi zokuhlengahlengisa ukugqitywa kwazo. Ndibetha umenzi weelebheli okanye ndithatha amanyathelo ongezelelweyo ukubeka ibhegi yomnikelo evenini ukuze yehliswe endaweni yokuxutywa nezinye izinto kwigaraji.
4. Ukugcina ikhitshi licocekile.
Ngokutya okuninzi, okuninzi okulungiswayo nokutyiwa ekhaya kwezi nyanga zidlulileyo, ndiye ndanamathela malunga nale. Imug okanye imela yebhotolo esinkini ibingenamsebenzi kangako xa bekukho mna nomyeni wam kuphela emini (besisebenza sobabini kuphela ekhaya iminyaka, nangaphambi kobhubhane), kodwa isitya esimdaka usinki kwezi ntsuku ujika kwintaba yezitya ezimdaka ngephanyazo. Kodwa kuthatha kuphela imizuzwana engama-30 ukuyenza ngokuchanekileyo. Ukuhlamba imagi okanye ukubeka izitya ezimdaka kwindawo yokuhlambela izitya kutyalo-mali ekhitshini, apho wonke umntu ebhodini kunye nethamsanqa, zihlala zilungile imini yonke, kwaye okona kubaluleke kakhulu, zicocekile kwaye zikulungele ukuqengqeleka xa ilixesha Pheka ukutya.
5. Ukujonga ukungangqinelani kohlahlo-lwabiwo mali okwangoku.
Enye yeendlela ezininzi zokugcina uhlahlo-lwabiwo mali lukwazi ukubamba xa kukho into engahambi kakuhle. Usapho lwam lusebenzise YNAB iminyaka, kwaye bendihlala ndibhala nje izinto endifuna ukuzijonga ndakuba ndigqibile kwiseshoni yam yohlahlo-lwabiwo mali. Kodwa ndiye ndafumanisa ukuba ngelixesha ndigqibayo, ndiza kuzinika ikhefu ndilibale malunga nokubona apho ihlawulwe khona imfihlakalo okanye ndiyibeke ecaleni kude kube kamva kwaye ndigqibe ngoluhlu olunzima, olunokubangela izinto ezidikayo Jinga e. Ngoku, endaweni yoko, ndiyayivula iakhawunti ekubhekiswa kuyo kwaye ndithathe ukujonga kufutshane okanye ndibuze umyeni wam kuloo ndawo (okanye ndimthumelele i-imeyile ukuba uyasebenza) yayiyintoni intlawulo ethile. Oku kugcina uhlahlo-lwabiwo mali lwam, ndilondoloze imali, kwaye lindivumele ukuba ndigqibe ngokupheleleyo xa ndivala usetyenziso lwam lohlahlo-lwabiwo mali emva kweseshoni.
Ngabantwana abahlanu, uShifrah ufunda into okanye ezimbini malunga nendlela yokugcina indlu icwangciswe kakuhle kwaye icocekile ngentliziyo enombulelo ngendlela eshiya ixesha elininzi kubantu ababaluleke kakhulu. UShifrah ukhulele eSan Francisco, kodwa uye waxabisa ubomi beedolophu ezincinci eTallahassee, eFlorida, ngoku ayibiza ngokuba likhaya. Sele ebhale ngokugqibeleleyo iminyaka engamashumi amabini kwaye uyayithanda indlela yokuphila, ukugcina imemori, ukwenza igadi, ukufunda, kunye nokuya elwandle kunye nomyeni wakhe kunye nabantwana.
Igumbi eliqaqambileyo le-260-Square-Foot NYC Studio Igumbi lokuziva likhulu kakhulu
Ukuthengiswa kweThagethi yokuThengiswa kweKhaya kuqhuma kunye neeBargains kwifenitshala yangaphakathi nangaphandle, iiragi, kunye nokunye
Indlela yokuLunga ngokwenyani kwiPuzzle zeJigsaw-kunye, 6 ukuze uthenge ngoku
Kutheni Ukuhlamba Amakhethini Kungcono Kangako Kunokuhlamba Iminyango
Ithetha ntoni ingelosi engu-1212
kuthetha ntoni ukubona iingelosi emafini